I-samsung galaxy tab s2 8.0 ifumana i-Android 7.0 uhlaziyo lwe-nougat kwi-u.s.
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ifumana uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat eMelika
Inguqulelo ye-8.0-intshi yeGalaxy Tab S2 yithebhulethi elandelayo eUnited States ukufumana uhlaziyo olwalindelwe kudala lwe-Android 7.0 Nougat. Kwiveki ephelile , I-T-Mobile kunye neVerizon batyhala ezabo iiNougat zohlaziyo lweGlobal Tab S2 9.7, ke iyavakala into yokuba umahluko omncinci wokufumana uhlaziyo nawo.
Ukuba ungumnini we Galaxy Tab S2 8.0 ngenombolo yemodeli SM-T713, emva koko ithebhulethi yakho iyafaneleka kwi-Android 7.0 Nougat. Uhlaziyo lutyhalelwa yi-Samsung kwaye inobunzima ngaphakathi kwi-1.2GB, ke qiniseka ukuba unememori yangaphakathi yasimahla ngaphambi kokuzama ukuyikhuphela.
Kunye neempawu ezintsha eziqhelekileyo kunye nokuphuculwa okubandakanyiweyo kwi-Android 7.0 Nougat, uhlaziyo luzisa kwakhona isikhuselo sango-Epreli. Ngayiphi na imeko, okoko uhlaziyo lukhutshwe ngaphandle kwi-OTA kumaza, kungathatha usuku oluncinci ukufikelela kuzo zonke iiyunithi zeGalaxy Tab S2 8.0.
Ngelishwa, kunzima ukuxelela ukuba yeyiphi kanye inguqulelo ye-9.7-intshi nenombolo yemodeli SM-T813 eya kufumana uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat, kodwa akufuneki ukuba ilibaziseke kakhulu ukusukela oko udadewabo omncinci eqala ukuyifumana.
I-Samsung Galaxy Tab S2 8.0
umthombo: IiNdawo zeAndroid
t umsele ohambayo kunye nokutshintsha
Ukuba ungumnini we-Apple iPhone XR ungagcina ngokunikwa imali ethile
Uyisebenzisa kanjani ifowuni njengekhampasi + eyona app ikhampasi ilungileyo ye-Android
Ividiyo esemthethweni ye-Apple ikubonisa ukuba uyisebenzisa njani into yeWalkie-Talkie kwiApple Watch
I-T-Mobile isenayo i-Buy One, Fumana into enye kwi-Galaxy S8, S8 +, LG G6, kunye ne-LG V20!
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab S 10.5
I-Apple Apple Watch Series 6 iya kukhawuleza kwaye inganyangeki ngamanzi